यसपालिको तिहारमा घरमै यसरी मिठो सेलरोटी पकाउनुहोस् « Salleri Khabar
यसपालिको तिहारमा घरमै यसरी मिठो सेलरोटी पकाउनुहोस्
हिन्दुहरूको दोश्रो ठुलो चाड तिहारको चहलपहल अहिले सुरु भइसकेको छ । तिहार नजिकिदै जाँदा बजारमा किनमेल गर्नेदेखि लिएर घर घरमा गुलिया र चिल्ला परिकार पकाउनेहरूको चहलपहल सुरु भएको छ । झिलिमिलीको पर्व भनिने तिहारको विशेष परिकार हो, सेलरोटी । सेलरोटी प्राय: सबैलाई मन पर्छ तर, पकाउन भने थोरैलाई मात्र आउँछ । यसरी सजिलै सेलरोटी बनाऊ :
सेलरोटी बनाउन चाहिने भाँडा : सेल पकाउँदा राम्रोसँग तैरिने खालको गाहिरो र सम्म पिँध भएको कराई या ताई, एक फिट लामो बाँसका दुई मोटो सिन्का । सेल रोटी पकाउँदा तयारी पिठो कराईमा सजिलै संग खन्याउनका लागि पानीको बोतललाई आधा काटेर मुखतिरको भाग, सेल राख्ने नांग्लो ।
सेलरोटी बनाउन चाहिने सामाग्री : आवश्यकता अनुसार चामलको पिठो । मैदा एक कप, रोटि फुलाउनका लागि खाने सोडा, पानी अथवा दुध, घ्यु दुई कप, चिनी दुई कप, एक लिटर खाने तेल, मन भए अलिकति अंलैची, ल्वाङ्ग तथा काजु राख्न सकिन्छ ।
बनाउने बिधि : चामललाई राम्ररी पखालेर रातभर भिजाउने, भोलिपल्ट चामलबाट पानी हटाउने र थोरै थोरै गर्दै दुई चम्चा चिनी र एक चम्चा घिउ हाल्दै सिलाउटो वा ग्रान्डरमा पिनेर पिठो बनाउनु पर्छ । पिठो राम्रो र ललिसो हुनुपर्छ । यसरी नै सबै चामल पिसिसकेपछि पिठोमा आधा कप मैदा हालेर बिस्तारै थोरै–थोरै पानी राख्दै मज्जाले मोल्नु पर्छ । धेरै बाक्लो पेस्टमा पनि राम्रो सेल बन्दैन । तातेको कराईमा भाँडोको दुई इन्च माथिसम्म आउनेगरी तेल राखेर, तेल तात्न दिनु पर्छ । अब तातेको तेलमा काटेको बोलतको सहायताले मुछेको पेस्टलाई गोलो आकार हुने गरेर हाल्नु पर्छ । सेललाई राम्रोसँग पाक्ने गरेर दुबैपट्टि फर्काएर सुनौलो खैरो नहुन्जेल पकाउनु पर्छ । यसरी बिस्तार विस्तार तातो सेलरोटी तयार हुनेछ ।
यसकारण खानुहोस् आँप !
शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यका लागि कस्तो खाना खाने ?
स्वास्थ्य मन्त्रालयका डाक्टरको परिवारलाई कोरोना सङ्क्रमण
बोतलमा पेट्रोल नदिएपछि सर्पको प्रहार !
बुलढाणाको एक पेट्रोल पम्पमा बोतलमा पेट्रोल लिन आएका दुइ युवकले पम्पका म्यानेजर र क्यासियरको कोठामा